ဗိုလ်တထောင် စေတီတော်ကြီး အတွင်းအပြင်နှင့် တန်ဆောင်းများကို ပြန်လည် မွမ်းမံသွားမည် - Yangon Media Group
ဗိုလ်တထောင် စေတီတော်ကြီး ကြံ့ခိုင်အောင်ပြု ပြင်မွမ်းမံရာတွင် စေတီတော်အတွင်းအပြင် ကြံ့ခိုင်အောင်မွမ်းမံခြင်းအပြင် စေတီတော်ရင်ပြင် ကျဉ်းသောကြောင့် တန်ဆောင်းများလည်း ပြန်လည်မွမ်းမံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါအကြောင်းကို ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ဧပြီ ၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ဆံတော်ရှင် ပြည်တော်ဝင်ပင့်ဆောင် ခြင်း ဗုဒ္ဓပူဇာမဟာ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရင်း ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စေတီ တော်အတွင်းအပြင် ကြံ့ခိုင်ရေး စစ်တယ်။ ကိုယ်လုံးတော်ကြီးကြပ် ရေးနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက ကျွန်တော့်တာဝန်ပဲ။ ကျွန်တော်တာ ဝန်ယူရတယ်။ ကြံ့ခိုင်မှုက အဓိ ကပဲ။ အတွင်းမှာရေယိုမှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ စေတီတော်ကြီးတွင် နှစ်ထပ် တန်ဆောင်းများလည်းရှိပြီး တန် ဆောင်းများ၏အောက်ထပ်တွင် ဆင်းတုတော်များထားရှိကာ လူ များအပေါ်ထပ်တွင် နေထိုင်ကြသည်များကို ပြန်လည်ဆောင်ရွက် ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး ချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှ ဧပြီ ၂ ရက်တွင်ကျင်းပသည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားခဲ့ သည့်အပေါ် ပြန်လည်ဆောင်ရွက် ခြင်းများနှင့်ရင်ပြင်တော်နေရာကျဉ်း သောကြောင့် မလိုအပ်သောနေ ရာယူသောတန်ဆောင်းများကို အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက် ခြင်းများဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ဗိုလ်တထောင်ဘုရားက နည်းနည်းလေး ရင်ပြင်ကကျဉ်းတယ်လေ။ နေရာယူထားတာနည်း နည်း ပြန့်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်။ဥပမာအားဖြင့် ဆင်းတုတော်တွေ ကဇရပ်ရဲ့ရှေ့မှာအောက်ကျနေတယ်။ အဲဒါတွေကိုအကုန်လုံး ပြန်ပြီးတော့ ဆင်းတုတော်တွေကို ပြန်မြှင့်တင်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ အချို့မလိုအပ်တဲ့ တန်ဆောင်းတွေ နေရာသိပ်ယူတဲ့တန်ဆောင်းတွေဆိုရင်အသစ်ပြန်ဆောက်မယ်”ဟု မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။ စေတီတော်၏ထီးတော် ဟောင်းကိုလည်း စေတီတော်တစ် ဆူထပ်တည်ခြင်းမပြုဘဲ အဆောက် အအုံအတွင်း ထားရှိအပူဇော်ခံ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်း၏ပြော ပြချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုစရာ နယ်မြေကြီး တစ်ခုအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆေ?
သတင်းသမား ခါရှိုဂျီကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်မည်ဟု ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသား ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည့်သတင်??
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် စိုက်ထူရန်ကိစ္စ ဒေသခံတို့၏ ဆန္ဒသာ အဓိကဟု ဒီချုပ်ပြောခွင့်ရဆို
၈၈ အရေးတော်ပုံ ကြွေးကြော်သံနှင့် တောင်းဆိုချက်များ မရသေး၊ ၈၈ စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ခိုင်မာနေရန် ?